UHoffine ngumfoti okhethekileyo kwi-horror | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimovie ezoyikisayo kunye nokufota kuhlala kusondele kakhulu. Kubathandi bolu hlobo lwefilimu, phakathi kwazo endizibandakanya phakathi kwam, ngolwesiHlanu umhla we-13 okanye iPychocho zinenye into eqhelekileyo, ngakumbi kwifoto ethile okanye kwisakhelo esinokuyifumana kolo luvo luyindumasi abazibizayo.
UJoshua Hoffine ngumfoti Ubambe iifoto iminyaka elishumi elinesithathu inxulumene nehlabathi loyikiso apho ingqondo yethu ithande ukuba buhlungu ngokujonga kade. Kwiintsuku zakhe zokuqala, wayenoncedo oluxabisekileyo lwabantwana bakhe lokudala iimeko ezimnyama ezihamba ngaphaya komda kwezinye.
UJoshua Hoffine naye unayo iprojekthi yakho kwiKickstarter ukwenza incwadi yakhe yeefoto ezinxulumene nokoyikisa kunye nemifanekiso eyoyikisayo engathatha umphefumlo wakho ukuba into yakho zizinto ezintle kwaye zithambile, ke uyalumkiswa.
Uneminye imifanekiso eyothusayo ngokwenene Ngelixa kwabanye edlala ngezinto eziqhelekileyo zezo bhanyabhanya zoyikisayo apho sifumana abalinganiswa beempawu ezibonakalayo.
Ukuzisa ubuntwana kwindawo eyoyikisayo sesinye sezixhobo ezisetyenziswa kakhulu ngababhali abanjengoStephen King okanye abalawuli beenkonzo abanjengoSpielberg ngokwakhe noPoltergeist, apho intombazana ebukele umabonwakude ngalo lonke ixesha ibangele into eyoyikisayo kwaye ichukumisile i-psyche yombukeli.
UJoshua udlala ngombono wombukeli ukwenza ezithile indibaniselwano ebetha kakhulu njengaleyo ebomvu kunye neentyatyambo kunye nentombazana ebomvu ephethe i-teddy bear yayo ngelixa ezinye izandla zisondela kancinci zibonisa indawo eqaqambileyo, nangona ingazishiyi ezo ngcinga ndizithethileyo ngasentla.
Unayo iKickstarter yakhe kweli qhagamshelo y facebook wakho for landela umsebenzi wakho kwiifoto ezinokucaciswa kwangaphambili kobumnyama kunye nefilimu eyoyikisayo eye yakhwaza kakhulu kwiimovie ezininzi.
Ukuba ezakho zoyikiso, ungaphoswa kukuqeshwa kunye ezi 10 iifilimu ezimfutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Lo mfoti wezithombe okhethekileyo eyoyikisayo usebenzisa abantwana bakhe kwiifoto zakhe